Tag: jonathan salem basketin | Martech Zone
Tag: jonathan salem basketin
Gore rakapera, ndakanyora tsamba ndichipindura Jonathan Salem Baskin, ndichitora pfungwa yake yekuti Social Media inogona kuva nenjodzi kumakambani. (Ini chaizvo ndakabvumirana naye pane zvakawanda zvinoverengeka). Ino nguva - mumaonero angu - VaBaskin vakairovera. Kambani yega yega yanga ichisvetuka pasocial media bandwagon, ichiwedzera mari yekushambadzira munhandare iyoyo, asi vashoma vari kuona kudzoka kwavaitarisira. Burger King yakavezwa kuburikidza
Kukwezva Kune Ngozi Kudzivisa iyo Webhusaiti Yemagariro
Chishanu, Mbudzi 26, 2010 Mugovera, Gunyana 26, 2015 Douglas Karr
Ini ndanga ndichifunga nezve kutumidza ichi posvo, Nei Jonathan Salem Baskin Akashata… asi ini ndinobvumirana naye pane akawanda mapoinzi mune yake posvo, Iyo Dangerous Kukwezva kweSocial Web. Ini ndinobvuma, semuenzaniso, kuti vezvenhau gurus vanowanzoedza kusundira mabhizinesi mukushandisa vezvenhau vasinganyatsonzwisisa tsika kana zviwanikwa kukambani yavari kushanda nayo. Hazvifanirwe kunge zvichishamisa, zvakadaro. Vari kuedza kutengesa chigadzirwa ... chavo
Chii chiri Kupfuura Iwe?
Chitatu, October 24, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nezuro ndakadya masikati neshamwari yangu yakanaka, Bill. Sezvo isu tichidya yedu inonaka yehuku tortilla muto paScotty's Brewhouse, Bill neni takakurukura iyo yakaoma nguva iyo kukundikana kunoshanduka kuita kubudirira Ini ndinofunga vane tarenda chairo vanhu vanokwanisa kufungidzira njodzi uye mubairo uye kuita zvinoenderana. Vanosvetukira pamukana, kunyangwe njodzi yacho isingakundike… uye zvinowanzoendesa mukubudirira kwavo. Kana ndiri kurasikirwa newe, namatira neni. Heinoi